Mapato eMDC Alliance neMDC-T Otarisirwa Kunetsana Pamusoro peZita
Chikumi 24, 2021
Pave nemaonero akasiyanasiyana pagakava ramuka pamberi pesarudzo dza2023 pakati pemapato eMDC Alliance neMDC-T pamusoro pezita rekuti MDC Alliance, zvichitevera mashoko emutungamiri weMDC-T, VaDouglas mwonzora ekuti vanogona kupinda musarudzo dz2023 vari pasi pezita rekuti MDC alliance.
Mmwe wevatevedzeri vemutungamiri weMDC Alliance, VaTendai Biti, vakazobudawo zvakare panhepfenyuro yeHeart and Soul Television vachiti bato ravo ringangopinda musarudzo riri pasi perimwe zita kuitira kuti nyaya yezita isazovakanganisa.
Asi VaBiti vanonzi vakati vanofanirwa kuramba vachishandisa zita rekuti MDC, vozoisa rimwe mberi risiri Alliance kuitira kuramba vakabata rutsigiro rwavanga vaunganidza pasi peMDC Alliance.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira, VaRejoice Ngwenya, vanoti VaMwonzora nebato ravo reMDC-T havafanirwe kuswera vachida kukambira zita rekuti MDC Alliance nekuti kubva zvakabuda mutongo wedare reSupreme Court uchiti MDC-T ndiro bato riri pamutemo, pamwe chete nekutora pfuma yose yeMDC Alliance, zvakatoratidza kuti mapato aya akasiyana.
VaNgwenya vanoti MDC-T inofanirwa kuramba iri mudanga rayo, kwete kuti ide kukanganisa zvakare vari kumhanya vari mugwanza reMDC Alliance. Vanotiwo hazvizoshamisi kuona MDC-T ichipinda musarudzo ichinzi MDC Alliance, vachiti pasi peZanu PF chese chinhu chinogona kuitika.
Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZanu PF, VaGilbert Dzikiti, vanotiwo sezvo MDC-T riri iro bato rakaonekwa nedare reSupreme Court kuti ndiro riri pamutemo, zviri pamutemo kuti bato iri rive iro rinopinda mumubatanidzwa weMDC Alliance.
VaDzikiti varambawo zvakare mashoko kana muono wekuti Zanu PF ndiyo ine chekuita nekunetsana kuri mumapato maviri aya, vachiti matambudziko ari muMDC haana kutanga nhasi asi kuti akakonzerwa nevaive mutungamiri webato iri, mushakabvu VaMorgan Tsvangirai mushure mekudoma kwavo vatevedzeri vavo vaviri, uye nekuda masimba kwevamwe vari mubato iri.
Hurukuro naVaRejoice Ngwenya pamwe naVaGilbert Dzikiti
Mutungamiri weNyika, VaMnangagwa, Vanoti Hurumende ichabatsira paRufu RwaVaGiles Mutsekwa veMDC-T
Mapurisa Anozivisa Kuti Nhengo yeZanu PF yekunzi Yakapambwa neNhengo dzeCCC kuChimanimani Yawanikwa Uye iri Kubatsira Mapurisa
Mhuri yeZimbabwe Yorangarira Nhaka neMabasa Akabatwa neGamba reNyika, Mushakabvu VaJoshua Nkomo
Kuderera kweCovid-19 Pasi Rose Kwobatsira muKumutsiridza Boka reKushanyirwa kweNyika